Wararka Shirkadda |
Intee in le'eg waa in la maydho kabaha dacarta oo la beddelo?
by admin on 21-10-15
Slippers -ku waa daruuriga maalinlaha ah ee lagama maarmaanka u ah guriga, laakiin waxay u keentaa raaxo iyo raaxo qofka isla mar ahaantaana, sidoo kale waxay noqotay Xagasha dhinta fayadhowrka oo meel sahlan oo bini aadam ahi iska indho tirayso. Sahan lagu sameeyay in ka badan 4,000 oo qof ayaa muujinaya in in ka badan 90% dadku ay caado u leeyihiin c ...
Akhri wax dheeraad ah
Xakamaynta Laba -jeer ee Isticmaalka Tamarta - Warshadaha oo Xirmay Iyada oo ay Jirtay Korontadii Shiinaha
by admin on 21-10-05
Waxaa laga yaabaa inaad ogaatay in siyaasaddii “laba -xakamaynta isticmaalka tamarta” ee dawladda Shiinaha ay saamayn gaar ah ku yeelatay awoodda wax -soo -saarka ee qaar ka mid ah shirkadaha wax -soo -saarka, iyo bixinta amarada warshadaha qaarkood waa in dib loo dhigaa. Intaa waxaa dheer, Wasaaradda Shiinaha ee E ...
Afar tallaabo si aad u dooratid dacasyo sax ah
by admin on 21-09-07
Afar tallaabo si aad u doorato kabaha sibidhka ah Dhowr tallaabo oo fudud, u dooro kabaha saxda ah ee ilmahaaga Kabaha la arki karo waa in si dhab ah loo soo xushaa, ha dareemin heer muuqaal oo wanaagsan, hoosta hal. Haddaba sidee loo kala saaraa tayada dacasyada? Aynu hore u socono: 1. gacanta ku miisaan miisaanka sho ...
Waxyeelada dacasyada xun
Waxyeellada dacasyada xun Xilliga xagaagu waa imanayaa, waa waqtigii aan u soo iibin lahayn kabo sibidh ah oo qurux badan, waalidiin badani sidoo kale ma ilaawi doonaan inay u keenaan kabo siib ah ilmahooda, uma oggolaan doonaan cagaha yar ee ilmaha inay qaboojiyaan! Dhab ahaantii, xulashada kabaha dacwadu waxay saamayn doontaa dhinacyo badan, haddii aan dooranno ...
Talada Nadiifinta Slipper 1
by admin on 21-08-17
Talada Nadiifinta Slipper 1 Cimiladu dhawaan waxay noqon doontaa mid kulul, gaar ahaan Guangdong aaggaas, waxay xirtay gacmo gaaban, qaboojiye furan. Dad badan ayaa ka soo bixin doona kabaha caagga ah, laakiin aad bay u wasakhoobeen dhawr bilood ka dib, wasakhuna way adag tahay in la dhaqo. Dad yar oo aan ...
Cinwaankaaga: Tu Beer Warshadeed, Magaalada Neikeng, Jinjiang, Fujian China
wararkii ugu dambeeyay
Intee in le'eg ayaa kabaha lagu maydho a ...
Waa maxay maaddada EVA?
Xakamaynta Labada Isticmaalka Tamarta - Xaqiiq ...
”Xakamaynta laba isticmaalka tamarta ...
Su'aalaha ku saabsan alaabtayada ama qiimeeyaha, fadlan noo dhaaf emailkaaga oo waxaan la xiriiri doonaa 24 saacadood gudahood.
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2021: Dhammaan Reserved Rights.